Dugsiga barbaarinta kahor - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Meel lagu ciyaaro, wax lagu barto oo xiise loo yeesho!
Dugsiyadeenna xanaanada waxay siisaa fursado aad u fiican carruurta 3 iyo 4 jirka ee dhammaan xirfadaha iyo awoodaha, waxayna xaqiijinayaan inay si habsami leh ugu gudbaan xanaanada.
Macallimiinta xanaanada ee shatiga loo siiyay waxay bixiyaan khibrado waxbarasho si ay u horumariyaan xirfadaha ilmahaagu u baahan doono si uu ugu guuleysto dugsiga. Ilmahaagu wuxuu yeelan doonaa saaxiibo cusub wuxuuna heli doonaa waqti badan oo uu ku ciyaaro oo ku sahmiyo. Waxqabadyada maalinlaha ah waxaa ka mid ah muusikada iyo dhaqdhaqaaqa, sahaminta dareenka, waqtiga sheekada, ciyaarta xannibista, ciyaarta riwaayadaha ah, ciyaarta banaanka, cunto fudud iyo waxqabadka waqtiga wareega.
Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore
Sii Faraskaaga Mustaqbal Bilow Weyn!
Diiwaangelinta Dugsiga barbaarinta kahor
Liiska Sahayda Dugsiga Kahor
Goobaha Dugsiyada Hoose
Fasallada barbaarinta ee dhammaan dhismayaashayada aasaasiga ah waxay socon doonaan Isniinta illaa Khamiista. Qoysasku waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay doortaan subaxyada oo keliya ama maalmaha dugsiga oo buuxa. Isdiiwaan geli ikhtiyaarka sida ugu fiican ugu shaqeynaya qoyskaaga. Daryeelka carruurta waxaa laga heli karaa Adventure Club ka hor iyo ka dib fasallada maalinta oo dhan laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo
Fasallada loogu talagalay carruurta 4-jirka ah (maalin dhan ama subax keliya)
Dugsiga barbaarinta oo maalin buuxda ah
Isniinta-Khamiista (8:45 am-3: 15 pm) .................................... .................................. $ 625 / bishii
Dugsiga barbaarinta maalin-badh
Isniinta-Khamiista (8:45 subaxnimo - 11:15 subaxnimo) .................................... ....................................... $ 310 / bishii
Maalmaha Ciyaarta Jimcaha
Carruurta dhigata fasallada xanaanada ee dugsiga hoose waxay kaloo iska qori karaan Maalmaha Ciyaarta Jimcaha. Maalmahan waxaa kormeeraya kalkaaliyayaashayada fasalka waxayna bixiyaan a
jawiga bulshada ee ay caruurtu ku sahamin karaan kuna ciyaari karaan inta lagu jiro maalinta iskuulka.
Xulasho: Maalmaha Ciyaarta Jimcaha (8:45 am-3: 15 pm) .................................. ........................ $ 160 / bishii
Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFC)
Fasallada barbaarinta carruurta ee ku yaal ECFC waxay socon doonaan Isniinta illaa Khamiista subaxa ama galabtii. Xannaanada carruurta waxaa la heli karaa kahor iyo kadib dhammaan fasallada dugsiga xannaanada iyo maalmaha aan dugsiga barbaarinta ahayn ee naadiga Adventure. Daryeelka Adventure Club waxaa loo heli karaa xanaanada carruurta ECFC laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 6 galabnimo
Fasallada loogu talagalay carruurta 3 jirka ah
2 nus-maalmood / usbuuc .............................. $ 180 / bishii
Isniin / Arbaco ....................................... 9:30 am-12 pm
Isniin / Arbaco ............................................... .1-3: 30 pm
Talaado / Thur ......................................... 9:30 am-12 galabnimo
Talaado / Thur ............................................... ... 1-3: 30 pm
Fasallada loogu talagalay carruurta 4 jirka ah
4 nus-maalmood / usbuuc .............................. $ 310 / bishii
Isniinta-Thur ....................................... 9:30 am-12 pm
Mon-Thur ............................................... .1-3: 30 pm
4 maalmood oo buuxa / usbuuc ............................... $ 575 / bishii
Isniinta-Thur .................................... 9:30 am-3: 30 pm
Isdiiwaangalinta sanad dugsiyeedka 2021-2022 way furantahay. Meelaha si dhakhso leh ayey u buuxsamaan!
Sannadkan hadda socda (2021-22) diiwaangelinta dugsiga xannaanada ayaa la xiri doonaa Diisambar 9, 2021
* Diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2020-2021 way xiran tahay.
Isdiiwaangeli khadka tooska ah
Ma raadineysaa helitaanka iskuulka barbaarinta ee hadda? Fadlan wac 651-351-4000.
Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore, 1111 Holcombe St S., Stillwater
Dugsiga barbaarinta (afar jir)
Dugsiga Hoose Andersen, 309 N. 4th St., Bayport
Dugsiga Hoose ee Afton-Lakeland, 475 St Croix Trail St, Lakeland
Dugsiga Hoose Brookview, 11099 Brookview Road, Woodbury
Harada Elmo Elementary, 11030 Stillwater Blvd. N., Harada Elmo
Dugsiga Hoose Lily Lake, 2003 West Willard St., Stillwater
Dugsiga Hoose Rutherford, Wadada 115 Rutherford, Stillwater
Dugsiga Hoose Stonebridge, 900 N. Owens St, Stillwater
Tilmaamaha Diiwaangelinta Dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta
Soo gal nidaamka lacag bixinta khadka tooska ah .
Markii ugu horeysay ee isticmaaleyaasha, guji "Abuur akoon cusub."
Ku dul duub calaamaddaada bogga "Browsing All Programs", ka dibna ku wareeji "Dugsiga barbaarinta," ka dibna erayga "Diiwaangelin". Guji ereyga "Diiwaangelin."
Xulo goobta uu ilmahaagu ka qayb geli doono.
Go'aamso habka lacag bixintaada.
Buuxi dhammaan macluumaadka ku habboon oo guji "Diiwaangelinta Dhameystiran."
Isku qor carruur dheeri ah dugsiga barbaarinta adoo raacaya tallaabooyinka 5 ilaa 7.
Markii aad dhammeyso saxiixa mid kasta oo ka mid ah carruurtaada dugsiga xannaanada, guji ereyada "Waxbarashada Bulshada" ee bidixda kore ee shaashaddaada.
Guji batoonka ku qoran "Faahfaahintaada."
Dhagsii tabta oraneysa “Dugsiga barbaarinta.”
Guji tabka u dhow shaashadda hoose oo ay ku qoran tahay "Soo-qaadashada La Oggol yahay ee La Maamulay."
Gali magacyada DHAMMAAN waalidiinta qeybta la idman ee la soo idmaday, iyo waliba qof kasta oo kale oo awood u leh inuu ka soo qaado ilmahaaga dugsiga barbaarinta. Fadlan sidoo kale ku dar lambar taleefan shaqsi kasta oo ka mid ah qaybta "Sharaxaad ama Xusuusin".
Guji batoonka hoose ee shaashaddaada oo lagu calaamadeeyay "Keydso Soo-qaadashada Idman."
Si looga caawiyo hoos u dhigida qiimaha waxbaridda, kharashka ka baaraandegista diiwaangelinta waxaa lagu dalacayaa lacag u gaar ah. Lacagta diiwaangelinta lama soo celin karo.
Liiska Bixinta Xannaanada
2021-2022 Sannad Dugsiyeedka
1-sanduuq oo ka mid ah 24 Crayola crayons
1-xirmo 10 calaamado lagu dhaqi karo Crayola
1-dhigay midabka biyaha
1-jir funaanad weyn oo shaati ah / shaati badhan weyn (kor ku qor magacooda)
1-sanduuq qalin qalin midab leh leh
1-xirmo calaamado masixi qalalan
4-dhejisyo xabag ah
1-dhalo oo ah nuuradda Iskuulka Elmer
1-buug ballaadhan oo sharci ah
1-baakad gogosha ah
2-sanduuqyada waaweyn ee Kleenex
2-sanduuqa Clorox Masaxada
1-boorso, weyn oo ku filan inuu xajiyo surwaalka barafka iyo kabaha
1-buste yar oo nasashada ah haddii aad tahay arday maalin dhan jira
1-sawir qoys si loogu soo bandhigo fasalkeena
Dhoolacadayn weyn maalinta koowaad ee dugsiga!
* Fadlan ku calaamadee buuga xusuus qorka, boorsada dhabarka, buste iyo shaati rinji magaca ilmahaaga; sahayda kale waxay noqon doontaa agabka bulshada.
Nooca daabacan liistada liiska iskuulka kahor
Waxaan rabnaa dhamaan ardaydayada yari inay fursad u helaan inay dhigtaan dugsiga barbaarinta.
Haddii aadan awoodin inaad iska bixiso sicirkayaga dugsiga xannaanada, fadlan nala soo xiriir. Deeq waxbarasho oo xaddidan ayaa loo heli karaa dadka degan Minnesota ee aan weli gaarin 5 sano laga bilaabo Sebtember 1 sannad kasta.
Waxay kuxirantahay daqliga qoyskaaga, waxaad uqalami kartaa adeegyo qiimo jaban ama bilaash ah.
Fadlan wac Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore 651-351-4000 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada waxbarashada dugsiga barbaarinta.
Carruurta dhigata dugsiga xannaanada oo ku taal mid ka mid ah dugsiyada hoose waxay leeyihiin ikhtiyaarka Adventure Club ka hor dugsiga barbaarinta AMA raacitaanka maalinta oo dhan fasallada barbaarinta.
Isku dar Dugsiga barbaarinta iyo Naadiga Tacliinta ee barnaamijka maalintii oo dhan loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 3-5. Dabacsanaanta, tayada sare leh, xanaano maalmeedka la dheereeyay waxaa laga bixiyaa Xarunteena Carruurnimada Hore. Qoysasku waxay kala dooran karaan inta ka horreysa, bartamaha maalinta iyo ka dib xulashooyinka dugsiga xannaanada. Khibrad leh, xirfadlayaal hal abuur leh ayaa bixiya daryeel shaqsiyeed sanad dugsiyeedka oo dhan, maalmaha aan iskuulka jirin, iyo xilliga kuleylaha. Waxqabadyadu waxay bixiyaan dheelitir u dhexeeya ciyaar qaabeysan iyo mid aan qaabeyn.
Cunug walba oo aadaya iskuulka gobolka Minnesota waa inuu lahaadaa diiwaanka baaritaanka caruurnimada hore kahor inta uusan gaarin xanaanada. Waxay ku lug leedahay qaab fudud oo fudud oo lagu ogaanayo sida canug da'diisu u dhexeyso 3 ilaa 5 sano uu u korayo una korayo meelaha aragga, maqalka, hadalka, iyo xirfadaha fekerka, iyo waliba caafimaadka guud iyo koritaanka.
Da'da ugufiican ee ilmahaaga baaris lagu sameyn karaa waa inta udhaxeysa 3 iyo 5. Qoysaska kudhaqan iskuulka degmada waa inay helaan kaarka waxbarida marka ilmahoodu buuxsamo 3. Hadii aadan helin ogeysiiska, fadlan wac Xafiiska Diiwaangelinta 651-351 -8412.
Jadwal u samee ballantaada
Waxaan hadda qaadaneynaa ballamo shaqsi ahaan iyo shiid ahaanba.
Jadwal ugu samee ballanta baaritaanka shaqsiyeed khadka tooska ah ama wac 651-351-4022. Baaritaanka waxaa lagu qabtaa Xarunta Carruurnimada Hore ee Qoyska, 1111 Holcombe St. S. ee Stillwater. Ballamadu waxay caadiyan qaadataa 1 saac.
Jadwal u samee baaritaanka dalwadlaha adigoo codsanaya foomamka baaritaanka . Kadib gudbinta foomamka, baare wuxuu jadwal u sameyn doonaa taleefan ama kulan kooban oo Zoom ah oo lala yeesho kaliya waalidka / ilaaliyaha. Aragtida iyo maqalka laguma hubiyo baaritaanka dalwaddii.
Yoolalka Baadhitaanka Carruurnimada Hore
Ogow sida ilmahaagu u korayo una korayo.
Ku xir qoysaska barnaamijyada carruurnimada hore iyo adeegyada kale ee bulshada ee loo baahdo.
Ka jawaab wixii su'aalo ama walaac waalidnimo ah ee aad qabto.
Aqoonso wixii walwal ee caafimaad ama waxbarasho ee jira si markaa wax looga qabto ka hor inta ilmuhu uusan dugsiga gelin.
Baaritaanka Carruurnimada Hore ma aha qiimeynta u diyaargarowga xanaanada mana ahan in dib loo dhigo illaa isla inta ka horreysa xanaanada. Carruurtu badanaa waxay maraan baaritaanka hal ilaa labo sano kahor intaysan gaarin xanaanada. Si kastaba ha noqotee, haddii ilmahaagu shan jir yahay, oo aan u qalmin xanaanada, oo uusan wali soo marin baaritaanka dugsiga xannaanada, wac si aad ballan u sameysato.
Booqo bogga Baaritaanka Carruurnimada Hore
Qadada ayaa loo diyaariyey ardayda dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta barnaamijkeenna maalintii oo dhan. Booqo bartayada Adeegyada Nafaqada si aad u hubiso liiska cuntada, u bixiso cuntada iyo wax ka badan.
Meesha boosku oggol yahay, gaadiid ka tagaya ama ka keenaya fasallada barbaarinta maalinta-buuxda ah ayaa laga heli karaa haddii aad ku nooshahay aagga ka-qaybgalka dugsiga hoose. Bus-ka maalin-dhexaad lama heli karo. Gaadiid looma heli karo fasalada dugsiga barbaarinta ee lagu qabto Xarunta Qoyska Carruurnimada Hore.
Booqo bartayada Gaadiidka wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad iska diiwaangeliso gaadiidka.
Maxaa Loogu Doortaa Dugsiga Xannaanada Carruurta?
Xaqiiqdii, waxaa jira xulashooyinka kale ee dugsiga xannaanada ee laga heli karo beesheena, laakiin kaayagu waa midka kaliya ee si buuxda ula jaan qaadaya manhajka Dugsiyada Dadweynaha ee Dugsiga Dadweynaha. Macallimiinteena dugsiga xannaanada waxay si dhow ula shaqeeyaan macallimiinta barbaarinta carruurta ee degmada oo dhan. Waxay wadaagaan fikradaha, waafajiyaan manhajka, waxayna ka hadlaan shaqsiyada ardayda xoogooda iyo baahidooda markay ka gudbayaan dugsiga barbaarinta iyo xanaanada.
Weli ma qancin? Waa kuwan sababo kale oo badan oo naloo doorto:
Macallimiin shatiyeysan iyo shaqaale si qoto dheer u daneeya bartayaashayada ugu da'da yar
Fasallo isku dhafan oo u adeega carruurta dhammaan xirfadaha iyo awoodaha
Manhaj ku habboon degmada
Fursadaha maalinta oo dhan iyo maalinta badhkeed ah
Gaadiid baska bilaash ah ayaa la heli karaa
Afar Xiddig oo Heer Sare ah
Gobolku wuxuu ku aqoonsaday barnaamijkeena dugsiga barbaarinta qiimeyn afar-xidig leh oo waalidka ah.
Waxaa jira Waxbadan oo Lagu Baran Karo Dugsiga Barbaarinta
Sida Loo Noqdo Arday Wanaagsan
Carruurtu waxay bartaan sida wax loo wadaago, looga qayb qaato kooxaha, loo raaco tilmaamaha loona yeesho saaxiibo cusub.
Waxay kaloo bartaan xirfadaha kahor xisaabta, sayniska iyo xirfadaha akhris-qorista si ay ugu diyaargaroobaan xanaanada.
Horumarinta Dareenka Bulshada
Carruurtu waxay helaan dareen ah naftooda, sahamiyaan, la noolaadaan asxaabtooda, waxayna dhisaan kalsooni iyo madax-bannaanida.
Waxay muhiim u tahay carruurta inay waqti la qaataan waalidiinta oo ay dhisaan xiriirro aamin ah oo lala yeesho dadka waaweyn ee ka baxsan qoyska.
Luuqadaha iyo Xirfadaha Garashada
Macalimiintu waxay ka caawiyaan carruurta inay fidiyaan xirfadahooda luqadeed iyagoo weydiinaya su'aalo fikirka kicinaya iyo soo bandhigida ereyo cusub.
Ardaydu waxay galaan waxqabadyo gacan qabasho ah oo ku xujeeya inay si dhaw ula socdaan, su'aalo weydiiyaan, tijaabiyaan fikradahooda ama xalliyaan dhibaato.
Carruurta waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ordaan, fuulaan oo ciyaaraan ciyaaro firfircoon - dhammaan waxyaabaha ka caawiya inay xoog yeeshaan oo ay horumariyaan xirfadaha dhaqdhaqaaqa.
Waxay sidoo kale abuuri doonaan shaqooyin farshaxan ah iyagoo adeegsanaya maqas, kaniisadaha iyo burushyada rinjiga - dhammaantoodna iyagoo horumarinaya xirfadahooda dhaqdhaqaaqa.
Waxaan jeclaanay wax walba oo kusaabsan barnaamijka xanaanada caruurta! Waxay ubadkeyga udiyaarisay tacliin ahaan xanaanada sidoo kale waxay u ogolaatay inay yeeshaan xiriir waara.